संविधान संशोधनको बिपक्षमा राप्रपाका सांसद !
Tuesday, 11 Jul, 2017 12:00 AM
काठमाडौं -दोस्रो चरणको चुनावअघि हुनै लागेको संविधान संशोधनका क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १० सांसद हराएका थिए । कतिपयले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ति सांसदलाई फकाएर गायब बनाएको आरोप लगाए । यतिसम्मकी राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासम्मले यस्तो आरोप लगाए । तर, त्यो पुष्टि हुन सकेन । अहिले फेरि संविधान संशोधनको विषयमा चर्चा चल्न थालेपछि राप्रपामा ध्रुविकरण र विभाजनको अवस्था आएको छ । राप्रपाका प्रत्येक सांसदको मतविना संविधान संशोधनमा एमालेबाहेकको दुई तिहाई पुग्न कठिन छ ।
सरकारले संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी गरिरहेका बेला राप्रपाका नेताहरूले परिमार्जन नगरिए उक्त विधेयकको पक्षमा भोट नहाली अनुपस्थित हुने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
वधेयकलाई मतदानमा लग्ने सरकारको योजना विफल तुल्याइदिएका भनिएका राप्रपाका सांसद अझै उक्त विधेयकको विपक्षमा दृढ देखिएका हुन् । विधेयक पारित गर्न यसअघि नपुग देखिएको केही सांसदको साथ जुटाउने सरकारको प्रयासका माझ राप्रपाभित्रको असन्तुष्टि प्रकट भएको छ । सरकारले चैत्र महिनाको अन्तिम साता दोश्रो पटक दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक हालसम्म संसदमै थन्किएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उक्त विधेयकलाई साथ नदिने वताई हरेको बेला सिंगो राप्रपाले साथ दियो भने पनि विधेयक पारित गराउन अहिलेसम्मको स्थिति कठिन छ । सरकार केही सांसदको सहयोग खोजीमा रहेका बेला राप्रपाकै केही सांसद विपक्षमा देखिए संविधान संशोधन बिधेयक पारित नहुने निश्चित छ ।
राप्रपा सांसद रामकुमार सुव्वाका अनुसार परिमार्जनसहित विधेयक नआए पार्टीको ह्वीप भनेर नबस्ने चेतावनी दिए । उनले भने,‘परिमार्जन त हुन पर्छ । सवै कुरा हामीलाई पनि कहाँ मान्य छ र ?’
सरकारले दुई महिनाअघि संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लग्ने तयारी गरेको थियो । राप्रपाका केही सांसद संसदमा उपस्थित नहुने तयारीमा रहेको थाहा पाए पछि नै उक्त प्रक्रिया रोकिएको बताइएको थियो ।
मुख्यतया संशोधनमा प्रस्ताव गरिएका नागरिकता, भाषा, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व जस्ता विषयले दीर्घकालसम्म राष्ट्रलाई घाटा पुराउने सांसद विराज विष्टले बताए । उनले भने, ‘परिमार्जन भएन भने हामीले पक्षमा किन मत हाल्ने ? सरकारमा गयौं वा समर्थन गरेका छौं भन्दैमा मुलुक दुर्घटनामा पार्ने तमसुकमा जथाभावी हस्ताक्षर र समर्थन गर्न मिल्दैन ।’
पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपाको संसदीय दलको बैठकमा संशोधनका विषयमा छलफल गरेरै अघिबढने वचन दिएको अर्का सांसद रमेश कुमार लामाले बताए ।
बुँदागत रूपमा दिल खोलेर छलफल गरेपछि तपाईहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यसमा म सहमत छ भनेर अध्यक्षले भनेको उनले सुनाए । सबै सासंद एक ठाँउमा रहने राप्रपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुन्तीकुमारी शाहीको विश्वास छ ।
उनले भनिन्, ‘हामीहरू विधेयकको पक्षमा जाने भन्ने कुरा एक प्रकारले सबै सासंदहरूको समर्थन भएको अवस्था हो यसमा अहिले असन्तुष्टी भएको मैले पाएको छैन ।’ राप्रपाको तीन सदस्यीय वार्ता टोलीले सरकारमा सहभागिता, संविधान संशोधन विधेयक लगायतका विषयमा सत्तापक्षसँग छलफल गरिरहेको बताइएको छ । तर, राप्रपाको आन्तरिक विवादका कारण मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने राजपाले चाहेको संविधान संशोधन सरकारले संसदमा पुराएपनि पारित हुन असम्भव देखिएको छ । जनप्रहार साप्ताहिक